Wararka - Quruxda Birta Tayada Sare leh
Miyaad jeceshahay inaad ka dhigto qaar ka mid ah soo jiidashada biraha tayo sare leh qalabkaaga? Fadlan kaalay oo nagu soo biir, Hadiyadaha qurxoon ee dhalaalaya ayaa fulin doona rabitaankeenna waxayna fikraddaada gelin doonaan nolosha dhabta ah.
Waxaan bixinnay naqshado waaweyn oo furan oo loogu talagalay silsiladaha dhaadheer, jijimooyinka jijimooyinka, jilicsanaanta xayawaanka, Qurxinta kirismaskasi aad u kala doorato, taas oo badbaadin lahayd qarashka caaryadaada, isla mar ahaantaana, naqshadeynta caadada ayaa sidoo kale aad loo soo dhaweynayaa. Waxaa jira naqshado kala duwan oo xargo leh walxo kala duwan, qaab -dhismeed, iyo midab la heli karo. Waxaan hubnaa inay maalintaada ka dhigi doonto soojiidashada DIY agabkaaga, sida calaamadaynta, kasbashada, suunka, suunka gacanta, soo jiidashada khamriga, taleefanka casriga ah, baabuurta iyo waxyaabo kaloo badan.
-Qalab: u dhinta shubka birta zinc ama birta, dhinta naxaas ama birta, aluminium
-Color: kartoo oo ay ku jirto midab hufan oo buuxsan, daabacaadda kala duwan
-Finishing: dahab dhalaalaya/ qalin/ nikkel/ naxaas, nikkel madow, matt ama dhammeystir qaraami ah
-Fitting: Qalabyo kala duwan ayaa la heli karaa
-Packing: bac poly caadiga ah ama sida waafaqsan shuruudaha macmiilka
Ka sokow dhammaystirka caadiga ah, waxaan sidoo kale leenahay UV daabacaadda biraha soo jiidashada keychainskuwaas oo ah alaabta farsamadeena cusub. Tani waa isku darka cajiibka ah ee leh astaamaha biraha 3D oo lagu dhejiyay asalka midabka buuxa. Ka dhig naqshaddaada mid soo jiidasho leh & indho qabad leh.
Iyada oo leh goobteenna wax -soo -saarka in ka badan 64,000 mitir oo laba jibbaaran iyo 2500 shaqaale khibrad leh oo lagu daray mashiinno ku filan & horumarsan, waxaan nahay soo -saare khibrad leh oo ku takhasusay soojiidashada caadadu samaysay, biinanka, qadaadiicda, daboollada, baararka xirashada iyo walxaha kale ee xayeysiinta leh in ka badan 3 sano.
Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato waxyaabaha soo jiidashada leh? Fadlan u soo dir fikradahaaga naqshadeynta iyo cabbirka, macluumaadka tirada sales@sjjgifts.com, waxaan ku wareejin karnaa astaamahaaga caadooyinka alaab aad u fiican.
Waqtiga dhejinta: Jul-28-2021